समुहमा होली खेल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘६ महिना जेल हुन्छ’ « Gaunbeshi
समुहमा होली खेल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘६ महिना जेल हुन्छ’
प्रकाशित मिति : 26 March, 2021
गत बर्ष पनि नेपालमा होली खेल्न कोरोनाले रोक्यो, सोही कुरा यसपटक पनि दोहोरिएको छ । सरकारले गतबर्ष होली नखेल्न गरेको आदेशलाई नागरीकले पालना गरेका थिए । यसपटक पनि होली मनाउन सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक रुपमा होलीको कार्यक्रम वा कन्सर्ट आयोजना गरेमा आयोजकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ९सह–सचिव० चक्रबहादुर बुढाले बताएका छन् । यसअघि नै गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सरकारले फागु पूर्णिमामा भीडभाड गरेर होली नखेल्न सार्वजनिक आग्रह गरिसकेको छ ।
‘भीडभाड गरेमा प्रहरीले कारवाही गर्छ,’ सह–सचिव बुढाले भने, ‘सार्वजनिक ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेमा आयोजकलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’ स्वतस्फूर्त मानिस निस्केर भीड भएमा उनीहरुलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न गृहको निर्देशन छ ।
तर, कार्यक्रम आयोजना गर्नेलाई चाहिँ प्रचलित रोग ऐन–०२० अनुसार कारवाही गरिने भएको छ । उक्त रोग ऐन–०२० अनुसार आदेश अवहेलना गरेमा १ महिना कैद र १०० रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सो ऐनले सरकारको काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिना कैद वा ७० हजार जरिवाना गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।